Maadheelee Walitti makuu fi Addaan baasuu
Maadheelee makuu fi makuu dhiisuu
Maadheelee wal cinaa filachuu dandeessa, achiin gara maadhee baaqqeetti maki. Faallaan, maadhee guddaa kan makaa maadheelee baaqqeetiin uumamee ture fudhattee, gara maadhee baaqqeetti hiruu dandeessa.
Man'eewwan hangii galtee man'eewwan makaman ofkeessaa qabutti yammuu gargalchitu, hangiin galtee jalqaba ni bittinnaa'a, ittaansee man'eewwan gargalchaman ni maxxanfamu. Man'eewwan garagalchaman man'eewwan makaman yoo tahan, haalata makiinsaa akkuma qabaniin taa'u.
Maadheelee wal cinaa fili.
Qaree man'ee addaan hiramu keessa kaa'I.
Title is: Maadheelee Walitti makuu fi Addaan baasuu